Huawei Enjoy 8 သည် TENAA ၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိသည် Androidsis
ယခုအချိန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအာရှကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Huawei သည်ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်လာမည့်နေ့ရက်များတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့သည့်မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ ဒီgigရာမအဖြစ်အပျက်မှာတော့ဒီကုမ္ပဏီတခုက၎င်း၏သက်တမ်းတိုးရန်ရည်ရွယ်ထားသည် ငါတို့အရင်ကပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ Mediapad စီးရီးသို့သော်ဤအရာသည်theရာမသည်ကျွန်ုပ်တို့နောက်မှတွေ့ရမည့်အခြားဆိပ်ကမ်းများတွင်အလုပ်လုပ်နေသည်ဟူသောအချက်ကိုဖုံးကွယ်မထားပါ Huawei Enjoy 8 - မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်မည်.
TENAA ၏အဆိုအရတရုတ်နိုင်ငံ၏ထုတ်ကုန်များသို့ရောင်းချမည့်မိုဘိုင်းဖုန်းများအားလုံးဖြတ်သန်းသွားသောတရုတ်လက်မှတ်ထုတ်ပေးသူနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် Huawei Enjoy 8 သည်အလယ်အလတ်တန်းစားထိုက်တန်သည့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်. အဘယ်အရာကိုသိရန်လိုပါသလား?
ဒီ terminal က ၅.၉၉ လက်မမျက်နှာပြင်နဲ့ပါ၎င်းကို HD လက်မ (resolution)6x 1.440 pixels မှ 720: 18 format အထိ ၆ လက်မခန့်တွင်အတိုချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်း၌အမြင့်ဆုံးနာရီကြိမ်နှုန်းဖြင့်9-HzHz ရှစ် core ပရိုဆက်ဆာနှင့် ၂၉၀၀ mAh ဘက်ထရီတို့ကိုတွေ့ရသည်။
သို့သော်ငြားလည်း, 3GB RAM တပ်ဆင်ထားသည်LDN-TL10 အမျိုးအစားနှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 32GB နှင့် LDN-TL4 တွင် 32 / 20GB ရှိသည်။
TENAA သည် 20 + 13MP dual အနောက်ကင်မရာနှင့် LED Flash ပါ ၀ င်ကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်8 megapixel front နဲ့အတူ။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ကျောဘက်တွင် fingerprint reader ပါဝင်ပြီး Android 8.0 Oreo ကိုအသုံးပြုထားသည်။ အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်တို့မှာ ၁၅၈.၃ x ၇၆.၇ x ၇.၈ မီလီမီတာနှင့် ၁၅၅ ဂရမ်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး၌၎င်းကိုဖြန့်ချိနိုင်သည့်ရက်စွဲကို အခြေခံ၍ တိကျသောအဘယ်အရာကိုမျှမသိရှိရသေးပါ ယခုနှစ်အလယ်တွင်တင်ပြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟု MWC ပြီးနောက်, သင်တန်း၏။ စတင်မိတ်ဆက်ချိန်တွင် ၄ င်းကိုရှမ်ပိန်ရွှေ (ရွှေ)၊ နှင်းဆီရွှေ (ပန်းရောင်)၊ အနက်ရောင် (အနက်ရောင်) နှင့်အပြာရောင် (အပြာရောင်) တို့ဖြင့်အရောင်လေးမျိုးဖြင့်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Huawei Enjoy 8 သည် TENAA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိသည်